လူတွေဟာ အများအားဖြင့် လူပုံအလယ်မှာစကားပြောရတာကို သေမှာထက်ပိုကြောက်ကြသလား? – H2H
လေ့လာမှုတွေရဲ့အဆိုအရ လူတွေရဲ့နံပါတ်တစ် အကြောက်ဆုံးအရာမှာ လူပုံအလယ်မှာ စကားပြောရခြင်းဖြစ်ပြီး သေခြင်းကတော့နံပါတ်နှစ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ပျှမ်းမျှလူတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး Jerry Seinfeld ဆိုတဲ့စိတ်ပညာရှင်က ” မင်းဟာ အသုဘတစ်ခုကို သွားခဲ့ရင် လူပုံအလယ်မှာ ချီးကြူးထောပနာစကားပြောဖို့ထက် မင်းကို အခေါင်းထဲမှာပိတ်ထားတာက ပိုကောင်းစေမှာပါ” လို့ ဥပမာလေးနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။
သိမှုအမူအကျင့် သီအိုရီအရ လူပုံအလယ်မှာ မိန့်ခွန်းကဲ့သို့ စကားပြောရမှာ ကြောက်ခြင်းကို “Social phobia” စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောက်တရားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူတွေရဲ့ အရှုံးတွေကနေတဆင့် ယင်းအကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုတေသီတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
တချို့လူတွေဟာ လူအများရှိတဲ့နေရာ၌ သီချင်းဆိုခြင်း မိန့်ခွန်းပြောခြင်း စတဲ့အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အာရုံကြောခံစားချက်၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အာရုံအလွန်စူးစိုက်ခြင်း၊ အရမ်းထိပ်လန့်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြောမယ့်စကားလုံးတွေကို မေ့နေတယ်လို့ထင်နေကြပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲကာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အဆင်မပြေသလို ခံစားရကြပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ သူတို့ဟာ အသက်ရှုမြန်လာခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း၊ အစာအိမ်ကအောင့်သလိုခံစားလာရခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး ယခုကဲ့သို့ လူအများရှေ့မှာ စကားပြောဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့အခါ ယခုလိုမျိုး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ၀ါရင့်နေတဲ့ Speaker တောင်မှကြုံနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေကို မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းဖြင့် ယင်းအကြောက်တရားကို ဖြေလျော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လုပ်နိုင်သလောက်ပေါ့။ တကယ်လို့သင်ဟာ လူထုနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးသင်အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဖူးလို့ ယုံကြည်လျှင် သင်ဟာ စကားပြောတဲ့အခါမှာ စိုးရိမ်စိတ်ကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလေးအနက်ကြီးတွေးမနေပါနဲ့၊ လူတိုင်းဟာ အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သင်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီး စိတ်အေးအေးထားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာ ကိုယ်ရဲ့အာရုံကြောတွေကို ကိုင်တွယ်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာတင် သင့်ရဲ့အကြောက်တရားကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်နိုင်ပြီး ပွဲပြီးသွားလို့ အကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြန်လည်ပြောပြနိုင်လျှင် သင်ဟာ လူအများရှေ့ စကားပြောရမှာ ကြောက်ရွံ့မှုလျော့နည်းလာပြီး ကမ္ဘာကြီးကို သင့်ရဲ့အမှာစကားပါးဖို့ စတင်နိုင်ပါပြီ။
Credit to TB_naung_naung
လူတှဟော အမြားအားဖွငျ့ လူပုံအလယျမှာစကားပွောရတာကို သမှောထကျပိုကွောကျကွသလား?
လလေ့ာမှုတှရေဲ့အဆိုအရ လူတှရေဲ့နံပါတျတဈ အကွောကျဆုံးအရာမှာ လူပုံအလယျမှာ စကားပွောရခွငျးဖွဈပွီး သခွေငျးကတော့နံပါတျနှဈလို့ သိရပါတယျ။ ဒါဟာ ပြှမျးမြှလူတှကေို ဆိုလိုတာဖွဈပွီး Jerry Seinfeld ဆိုတဲ့စိတျပညာရှငျက ” မငျးဟာ အသုဘတဈခုကို သှားခဲ့ရငျ လူပုံအလယျမှာ ခြီးကွူးထောပနာစကားပွောဖို့ထကျ မငျးကို အခေါငျးထဲမှာပိတျထားတာက ပိုကောငျးစမှောပါ” လို့ ဥပမာလေးနဲ့ပွောခဲ့ပါတယျ။
သိမှုအမူအကငျြ့ သီအိုရီအရ လူပုံအလယျမှာ မိနျ့ခှနျးကဲ့သို့ စကားပွောရမှာ ကွောကျခွငျးကို “Social phobia” စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အကွောကျတရားအဖွဈသတျမှတျထားပါတယျ။လူတှရေဲ့ အရှုံးတှကေနတေဆငျ့ ယငျးအကွောကျတရားဖွဈပျေါလာနိုငျသလို ငယျရှယျစဉျကတညျးက မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျကွောငျး သုတသေီတှကေ ယုံကွညျကွပါတယျ။
တခြို့လူတှဟော လူအမြားရှိတဲ့နရော၌ သီခငျြးဆိုခွငျး မိနျ့ခှနျးပွောခွငျး စတဲ့အပွုအမူတှေ ပွုလုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ အာရုံကွောခံစားခကျြ၊ စိုးရိမျခွငျး၊ အာရုံအလှနျစူးစိုကျခွငျး၊ အရမျးထိပျလနျ့ခွငျးတို့ ဖွဈပျေါလာပါတယျ။ သူတို့ဟာ ပွောမယျ့စကားလုံးတှကေို မနေ့တေယျလို့ထငျနကွေပွီး အာရုံစူးစိုကျမှု ဆုံးရှုံးရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိုးရိမျစိတျလှနျကဲကာ တုနျလှုပျခွောကျခွားတဲ့ အပွုအမူတှနေဲ့ လှုပျရှားမှုတှဟော အဆငျမပွသေလို ခံစားရကွပါတယျ။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပွောငျးလဲမှုအနနေဲ့ သူတို့ဟာ အသကျရှုမွနျလာခွငျး၊ နှလုံးခုနျမွနျလာခွငျး၊ အစာအိမျကအောငျ့သလိုခံစားလာရခွငျးတို့ကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ လူတိုငျးနီးပါး ယခုကဲ့သို့ လူအမြားရှမှေ့ာ စကားပွောဖို့ပွငျဆငျကွတဲ့အခါ ယခုလိုမြိုး အနညျးဆုံးတဈကွိမျတော့ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ၀ါရငျ့နတေဲ့ Speaker တောငျမှကွုံနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ကွုံတှရေ့မယျ့ အခကျအခဲတှကေို ကွိုတငျပွငျဆငျပွီး ဒီလက်ခဏာတှကေို မဖွဈအောငျကွိုတငျကာကှယျ ခွငျးဖွငျ့ ယငျးအကွောကျတရားကို ဖွလြေော့နိုငျပါလိမျ့မယျ။ သငျလုပျနိုငျသလောကျပေါ့။ တကယျလို့သငျဟာ လူထုနဲ့စကားပွောတဲ့အခါမှာ နောကျဆုံးသငျအောငျမွငျမှာ မဟုတျဖူးလို့ ယုံကွညျလြှငျ သငျဟာ စကားပွောတဲ့အခါမှာ စိုးရိမျစိတျကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အလေးအနကျကွီးတှေးမနပေါနဲ့၊ လူတိုငျးဟာ အလုပျကိုအကောငျးဆုံးလုပျခငျြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ သငျအလုပျကိုအကောငျးဆုံးလုပျဖို့အတှကျ အခှငျ့အရေးသကျသကျမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ပရိသတျကို ဆှဲဆောငျနိုငျမယျ့ စကားလုံးတှကေိုရှေးခယျြပွီး စိတျအေးအေးထားပွီး ကွိုတငျပွငျဆငျခွငျးဖွငျ့ သငျ့အတှကျပိုမိုလှယျကူစပေါတယျ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျယုံကွညျခွငျးဟာ ကိုယျရဲ့အာရုံကွောတှကေို ကိုငျတှယျထိနျခြုပျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးတဈရပျဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံမှာတငျ သငျ့ရဲ့အကွောကျတရားကို ဖမျးဆုပျလိုကျနိုငျပွီး ပှဲပွီးသှားလို့ အကွောကျတရားဖွဈပျေါလာပုံကိုပွနျလညျပွောပွနိုငျလြှငျ သငျဟာ လူအမြားရှေ့ စကားပွောရမှာ ကွောကျရှံ့မှုလြော့နညျးလာပွီး ကမ်ဘာကွီးကို သငျ့ရဲ့အမှာစကားပါးဖို့ စတငျနိုငျပါပွီ။